Xasan Cali Kheyre & Guddoomiyaha aqalka Sare oo kulan xasaasi ah yeeshay - Awdinle Online
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya waxaa kulan gaar ah ku yeeshay Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Xassan Cali Kheyre iyo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in kulanka diiradda lagu saaray hannaanka doorashada iyo doorka Xildhibaannada Aqalka Sare.
Xasan Cali Kheyrre oo ka hadlay kulankaan ayaa yiri “Sharaf ayey ii ahayd la kulanka guddoomiyaha AqalkaSare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta isoo booqday. Waxaan uga mahadceliyay kaalintii uu ka qaatay hannaanka loogu gudbayo muddo xileed cusub ee dowladda Soomaaliyeed”.
Xasan Cali Kheyre ayaa tan iyo markii Guddoonka Golaha Shacabka ay sheegeen inay kalsoonida kala laabteen waxaa uu la kulmay Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Cusmaan Jawaari iyo xubno kale.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Magacaaban oo taageero ka raadinaya Xildhibaannada Beelaha
Next articleMashquul ka jira Hoyga Guddoomiye Muudeey & liiska Golaha Wasiirada oo lagu…